Diyaarad Mareykanka Looga Soo Riday Afghanistan. – Bogga Calamada.com
Diyaarad Mareykanka Looga Soo Riday Afghanistan.
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay qeybo ka mid ah dalkaasi lagu soo riday mid ka mid ah diyaarada dowlada Nasarada Mareykanka.
Diyaarada laga soo riday Mareykanka ayaa ah nooca basaaska ee duuliye la’aanta ah’waxeyna ciidamada difaaca Cirka Imaarada Islaamiga Afghanistan diyaaradda kusoo rideen deegaanka Jabaliyah oo ah deegaan hoostaga degmada Gowrband ee gobalka Barwan.
Diyaarada ayaa gabi ahaan burburtay’iyadoona dhowr jeer sidaan oo kale ciidamada difaaca cirka Imaarada Islaamiga ay dhulka soo dhigeen diyaarado Basaas iyo kuwa dagaal oo ay leedahay dowlada Nasaarada Mareykanka.
Dhanka kale ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ayaa inta badan la wareegay gacan ku heynta degmada Khaan Abaad oo ka tirsan gobalka Qunduuz ee Waqooyga dalka Afghanistan.
Degmada Khan-abaad waxaa ka dhacay dagaal socday muddo afar maalmood oo xiriir ah’iyadoona dagaalka khasaara lagu gaarsiiyay maamulka daba dhilifka Kaabul.
Webseydka Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa baahiyay in dagaaladaasi dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen inka badan 52 isugu jirta saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka daba dhilifka Afghanistan.
Xubanaha lagu dilay dagaalka waxaa ka mid ah Nayaaz Muxamed oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaay maamulka Asharaf Gaani’waxaa sidoo kale dagaaladaasi lagu gubay Kow iyo Toban gaadiid oo noocyada gaashaaman ah.
Sidoo kale ciidamada Mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay labo gaari oo noocyada gaashaaman ah iyo keyd ballaaran oo hub ah kuwaasi oo ku jiray saldhiga degmada oo gacanta ay ku dhigeen ciidamada Imaarada Islaamiga.
Degmadan ayaa noqoneysa midii saddexaad oo ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga Afghanistan ay la wareegaan tan iyo markii todobaad ka hor Imaarada ay ku dhawaaqday Xamlo dagaaleedka Al-mansuuriyah’waxey ciidamada Mujaahidiinta horay ula wareegeen labo degmo oo ka kala tirsan wilaayaatka Qunduuz iyo Badkhashaan.